Xisaabiyeyaasha ganacsiga ee Forex Margin, Bamka, Miisaanka iyo Xisaabinta Meelaynta
Home / Trading / Qalabka Forex / Xisaabiyeyaasha Forex
Range Of Xisaabiyeyaasha Range
Waxaan soo saarnay tiro gaar ah oo ah xisaabiyeyaasha kuwaas oo gacan ka geysanaya waxtarka ganacsigeena. Mid waliba si taxadar leh ayaa loo horumariyay baahida ganacsiyada ee dhinaca hore ee hadafyada horumarinta. Ururkan waxaa ka mid ah: xisaabiye xisaabin, xisaabiyaha, mashiinka xisaabiyaha, xisaabiyaha xisaabiyaha iyo xisaabiyaha lacagta. Waa lagama maarmaan in ganacsatadu ay bartaan dhowr ka mid ah xisaabiyeyaashan, maaddaama ay caawin karaan horumarinta qorshe ganacsi iyo istaraatiijiyad, oo leh halis iyo soo-dhowaansho hore ee qorshahan. Xisaabiyayaashu waxay sidoo kale ka caawin karaan ganacsatada in ay ka fogaadaan khaladaadka aasaasiga ah, tusaale ahaan; Maqnaanshaha booska lagu qiyaaso hal dhibic oo kaliya ayaa kordhin kara khatarta ganacsiga si weyn.
Qalab aan badnayn oo lagu xakameynayo ku soo dhaweyntaada ganacsigaaga ganacsi kasta oo la bixiyay, muuqaalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si gaar ah u xisaabiso marinka aad u baahan doonto si aad ganacsiga u gashid suuqa.
lacagta Labo Xidig
aqbasho wax soo saarka
Margin Loo baahan yahay
Tusaale: Haddii aad rabto in aad ku ganacsato lacagta EUR / USD, qiimaha la soo xigtay ee 1.04275, oo ah xaddiga ganacsiga ee 10,000 *, adigoo isticmaalaya xammuulka 1: 200 markaa waxaad u baahan doontaa inaad haysato $ 52.14 dollars ee xisaabtaada si aad u daboosho soo-dhoweynta.
* hal wax ayaa u dhigma unugyada 100,000.
Qalabkani wuxuu fududeynayaa ganacsatada, gaar ahaan ganacsatada hodanka ah, iyagoo xisaabinaya mashiinnadooda ganacsi.
Tusaale: Waxaan dib u isticmaali doonnaa tusaale ahaan EUR / USD. haddii aad rabto in aad u ganacsatid labadii lamaane ee lacagta EUR / USD, qiimaha la soo xigtay ee 1.04275, oo ah xaddiga ganacsiga ee 10,000, markaa taasi waxay u dhigantaa hal moos. Sidaa darteed waxaad halis ugu jirtaa hal mitir markiiba.
Qaar ka mid ah ganacsiyada ganacsiga ayaa si toos ah u xisaabi doona dhibcooyinka maalin kasta, iyada oo ganacsatadan qalabkuna ay xisaabin karaan dhibcooyinkooda gaarka ah; dhibicda maalinlaha ah, iska-caabbinta iyo heerarka taageerada. Waxaad si fudud u soo gashay maalinkii hore, qiimaha hoose iyo qiimaha ku xiran ee amniga waxtarka leh. Xisaabiyuhu wuxuu markaa si toos ah u ogaanayaa dhibcooyinka kala duwan. Meelahan muhiimka ah ayaa ah qodobo muhiim ah oo ganacsatada badani ay iyagu isbedelayaan, laga yaabo in ay soo galaan, soo galaan, joojiyaan oo ay qaataan amarada xadka.
Qalab kale oo muhiim u ah ganacsatada qibrada leh, ama tafaariiqda cusub, xisaabiyahan ayaa lagama maarmaan u ah in lagu maareeyo khatarta ganacsigaaga iyo kormeerka guud ee suuqa.
Tusaale: Mar kale mar labaad adoo isticmaalaya lacagta euro / USD. Waxaad dooneysaa inaad halis kaliya 1% koontadaada ujirto ganacsi. Waxaad rabtaa inaad joojiso oo keliya jajabka 25 oo ka baxsan qiimaha hadda. Waxaad leedahay qadar xisaabeed oo ah $ 50,000, sidaa darteed waxaad isticmaali doontaa qiyaasta booska laba qaybood. Dhaqan ahaan waxaad khatar gelin doontaa $ 500 ganacsiga, haddii luminta joogsigaaga la dhaqaajiyo tani waxay noqon doontaa lumitaankaaga.
Waxaa laga yaabaa in midda ugu fudud iyo shakiga laga yaabo qalabka ganacsi ee ugu caansan, beddelka lacagta lagu beddelay wuxuu u ogolaanayaa ganacsatada in ay u beddelaan lacagta ay u leeyihiin lacagta gudaha lacag kale.
Tusaale: Haddii aad rabto inaad ku beddesho € 10,000 ilaa $ 10,000 natiijada waa 10,437.21USD. Iyadoo ku saleysan 1 EUR = 1.04372 USD iyo 1 USD = 0.958111 EUR.
Xisaabiyeyaashan waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo ganacsigeena Hubka ee haysta xisaabta xisaabta FXCC.